Waxtarka ukunta [ beedka ] 10 faaiido cajiiba - Caafimaad tips
Home / Caafimaadka / Cuntada / Waxtarka ukunta [ beedka ] 10 faaiido cajiiba
Waxtarka ukunta [ beedka ] 10 faaiido cajiiba
Daily Active March 20, 2020 Caafimaadka, Cuntada
Beedka ama ukunta waxay qani ku tahay oo laga helaa nafaqooyin badan oo ay ku jiraan booratiino fiitamiino iyo macaadin sidoo kale qaybta huruudiga ama jaalaha ah ee beedka waxaa ku jira oo laga helaa fiitamiinada kala ah vitamin e iyo vitamin iyo dufanka muhiimka ah ee loo yaqaano fatty acids.
Ukunta sidoo kale waxay ka mid tahay cuntooyinka ugu badan ee dunida laga isticaamlo isla markaan cunto karinta loogu adeegsado meel kasta waxaana dadka aad u jecel yihiin dhadhanka iyo beedka cunta ahaantiisa isagoo dadka qaarkood u noqda balwad aysan joojin karin cunistiisa.
Faaiidooyiinka beedka ama ukunta
Ukuntu waa cunto muhiim ah oo laga helo maadooyinka kala ah Salenium, Vitamin D, fitamin B6, Fitamin B12, waxaa kale oo ukunta laga ku jira macdano aad u tiro badan sida zinc, iron, iyo copper.
Ukunta maxaa laga helaa
Ukunta iyo uurka : beedku waa cunto u wanaagsan hooyada uurka leh waana il laga helo xadi aad u fiican oo protein ah waxaana laga helaa waxa loo yaqaano amino acids taas oo hooyada uurka leh iyo ilmaheeduba u baahan yihiin sidaa darteed waxaa laga helaa in badan oo fiitamiino iyo macaadiin ah.
Ukunta iyo galmada : beedku waxaa alle ku abuuray oo uu qani ku yahay fiitamiinada kala ah fitamin B6 iyo fitamin B5 kuwani waxay jidhka ka caawiyaan inuu isu dheeli tiro hoormoonada jirka isla markaana waxay la dagaalamaan stress ka ama walwalka iyo niyad jabka, sidaa darteed Vitamin B6 iyo Vitamin B5 waxay ku siinayaan dareen iyo kacsi caafimaad qaba oo kugu abuuraaya inaad galmada jeclaato.
Ukunta iyo caruunta : maadooyinka ugu muhiimsan ee beedka laga helo waxaa ka mida iron, protein, iyo fatty acid oo muhiim ah iyo fiitamiinada kala ah vitamin A, vitamin D, Vitamin E iyo vitamin B12, hadaba maadama beedka booratiinada ku jira aad u badan yihiin hadii subaxdii ilmaha uu ku quraacdo waxay ka dhigaysaa mid dharagsan waxayna ukuntu hoos u dhigaysaa gaajada ilmaha ka mashquulinaysa waxbarashada iyo iskuulka.
Ukunta iyo wajiga : qurxinta wajigu waa muhiimada koowaad ee dumarka sidoo kale qofkasta laga rabo inuu ku dadaalo sidaas daraadeed beedku waa hab daaweed qoto dheer oo lagu nadiifiyo wajiga waxaana ku jira booratiin aad ugu fiican wajiga sidaa darteed hadii aad doonayso in wajigaaga uu qurux badnaado ku dadaal inaad u isticmaasho beedka.
Ukunta iyo guska : beedka wuxuu ka mid yahay cuntooyin sare u sare u qaada awooda galmada sidaas oo ay tahay cunista ukunta waxay kaa caawinaysaa in hadiiba baahidaadu badan tahay uu sare u qaado xubinta taranka ee raga taas oo hawsheeda si fiican u gudanaysa.
Ukunta iyo cayilka : beedku waa cunto ay ku yartahay waxa loo yaqaano kalari oo ah waxyaabaha ka qayb qaata inuu qofku naaxo ama cayilo sidoo kale beedka ama ukunta waxaa laga helaa booratiino iyo nafaqooyin kale oo badan sidaas darteedna beedka wuxuu ka mid yahay cuntooyinka miisaanka dhima ee maaha cuntooyinka miisaanka kordhiya ama cuntooyinka lagu cayilo.
Ukunta iyo dumarka : maalin kasta dumarka iyo raga labaduba way cunaan beedka waana arin wanaagsan waayo wuxuu beedku sare u qaadayaa qofka caafimaadkiisa, laakiin dumarka qaba xanuunada ay ka mid yihiin macaanka iyo cilado kale oo caafimaad waa inay kala tashtaan dhakhtarkooda cunista beedka.
Ukunta iyo timaha : beedka waa cunto aad ugu muhiim ah timaha waayo waxay ka helaayaan nafaqooyinka timuhu u baahan yihiin waxay timuhu sidoo kale ka helaayaan vitamin A iyo biotin oo sidoo kale loo yaqaano vitamin H kaas oo ka mid ah fiitamiinada la isku dhaho B Complexe vitamins kalmada biotin waxay ka soo jeedaa giriigii hore sidoo kale waxay timuhu ka helaayaan beedka maadada loo yaqaano folate , sidaas darteed nafaqada ukunta ku jirta waxay tinta ka dhigaysaa mid qaro weyn oo caafimaad aaad u wanaagsan faaiidaduna waa in timaha aysan daadan.